Qolka Ganacsiga Forex - Forex Lens
Ka noqo xubinnimada
GURYAHA FOOMKA EE DALKA
XUBNIMADA GANACSATADA PRO
FARSAMADA FARSAMADA FARSAMADA
La soco, Baro oo Faa'iido Noogu Leh Qolka Ganacsigayaga Forex
Hel Helitaan Buuxda leh Xubinnimada Ganacsade Pro ugu hooseeya $ 65 bishii
Dhegayso Forex Lens Hawada saaran
XIGASHO SIRIUS XM RADIO
Hel Helitaan Buuxda oo maalinle ah LIVE durdurrada iyo fikradaha ganacsi faa'iido leh gudaha Discord iyo Forex Trading Room.
Kulamo ganacsi oo LIVE MAALIN AH
Gudaha qolkayaga ganacsiga ee sarifka calamiga ah, waxaad heli doontaa falanqeeyayaasha sare ee farsamada kuwaas oo ku siin doona hagitaan xirfadeed oo ka socda qaybo ganacsi oo kala duwan. Qulqulka Falanqeeyaha Lacagta Smart LIVE maalin kasta inta lagu jiro kalfadhiga New York, iyo 2-4 jeer usbuucii kalfadhiga London. Ku soo biir annaga Kala sooc server si aad u aragto jadwalka ugu cusboonaysiiyay ee durdurrada tooska ah. Waxaan xitaa martigelinaa durdurro bilaash ah qolka nasashada ee bilaashka ah ee bulshada Discord waqti ka waqti, markaa iska hubi inaad isha ku hayso kuwa!
Miyaad haysan wakhti aad ku habboonaato fadhiyada? Dhib malahan!
Dhammaan kulamadeena tooska ah waa la duubaa ka dibna waxaa loo diyaariyaa ganacsatada seega fadhiga tooska ah. Waxaan xitaa siinaa warbixin kooban oo maalinle ah oo suuqa ah ganacsatada aan haysan waqti ay ku biiraan uumiga tooska ah.
Ma haysaa su'aalaha TA? Wanaagsan!
Waxaan gabi ahaanba jecel nahay su'aalaha - maxaa yeelay tani waxay ka dhigan tahay inaad wax baranayso! Waxaad weydiin kartaa ganacsatadeena wax kasta oo ganacsi la xiriira inta lagu gudajiro durdurrada tooska ah iyo qolka sheekooyinka Discord. Had iyo jeer way ku faraxsan yihiin inay kaa caawiyaan halgankaaga ganacsi, inay kaa siiyaan jawaab celin shaxdaada ah, oo ay kaa siiyaan waxa ay ku arkaan suuqyada.
Qolka Ganacsi ee Forex waa Hal-Joogsi-Dukaan loogu talagalay ganacsatada dhammaan heerarka khibradaha.
Halka sixirku ka dhaco…
Buuxi Foomkan Si Loo Bilaabo:
Baro Falanqeeyayaashayada Farsamada
Ganacsade Machadka baro Ganacsiga hay'adaha nidaamyada ganacsatada doonaya inay si fiican u helaan joogteynta ganacsigooda. Waxaad ka heli kartaa in ka badan 100 + saacadood fiidiyowyada waxbarashada Lacagta 'Smart Money' gudaha qolka Ganacsi. Haddii aad tahay ganacsade doonaya inuu ganacsigaaga u qaado heerka ku xiga, ma jiro Mentor ka fiican oo laga barto Ganacsatada Machadka. IT waxay kaloo sameysay muuqaalo badan Trading Nut Podcast.
”Markaad barato sida loo raad raaco raadadka Smart Money ee suuqa Forex, iyo sida sicirka loo maareynayo, waxaad yeelan doontaa isbedel muuqaal ah sida aad u eegto Qiimaha, iyo sida aad uga ganacsato suuqyada. ”
- Machadka Ganacsi, Falanqeeye Sare oo Farsamo
Ganacsade SD waa annaga Alaab iyo Rabitaan ganacsade celcelis ahaan Halista-u-Abaal-marin Abaalmarin ah oo ah 2.83 fikradahiisa ganacsi (arki halkan). Isticmaalka qaabka wax iibsiga iyo dalabka, Ganacsadaha SD wuxuu awoodaa inuu ilaaliyo khatarta yar iyo abaalmarinta weyn. Xubnuhu waxay ka faa'iidaysan karaan fikradihiisa ganacsi iyo falanqaynta ganacsiga gudaha Qolka Ganacsiga iyo Discord.
Noqo Ganacsade Pro wax ka yar kafeega maalintii!
Macaamiishayadu Fiican ayaay naga filayaan, waanan bixinaa!
”Mahadsanid Ganacsadaha Machadka. Waxaad tahay ganacsade kii ugu fiicnaa ee aan abid la kulmo, maahan oo keliya khibraddaada laakiin u heellanaanta ardaydaada. - Xubinta Qolka Ganacsiga (2020)
" Jeclaanshaha waayo-aragnimada iyo sida ay u wada hufan tahay. Isku darka hibada iyo wadaaga aqoonta. Si fiican loo xakameeyo. Sida shaqada oo kale. Sii wad ragga! ”- Xubinta Qolka Ganacsiga (2020)
"Waxay mudan tahay dinaar kasta. Aad baan ugu cusubahay ganacsiga markii aan ku biiray qolkooda ganacsiga. Waxaan sidoo kale u isticmaalaa istaraatiijiyadda waxqabadka qiimaha ee crypto waana darn waxtar leh. Waxaan aad ugu talinayaa Forex Lens qof kasta oo hadda bilaabaya ganacsiga. Waxay u egtahay inay sidoo kale leeyihiin waxyaabo badan oo horumarsan hadda iyo ganacsato badan oo wanaagsan oo khilaaf ah oo weyn. Wax badan oo ka mid ah guushayda ayaan u tiiriyaa iyaga! ”- Xubinta Qolka Ganacsiga (2020)
“Ma qiimeyn karo Forex Lens sare ku filan! Adeeg aad u fiican, had iyo jeer waa halkaa haddii aad wax su'aalo ah qabtid oo aad hesho talobixin khibrad leh! Falanqaynta weyn ee suuqyada! Xaqiiqdii aqoon aad u badan ayaa leh ka dib caawinta iyo talada. Waxaan kugula talin lahaa qofkasta oo raba inuu kasbado aqoon dheeri ah oo ganacsade ka noqoshada ganacsiga. ” - Xubinta Qolka Ganacsiga (2021)
”Haddii aad qorsheyneyso inaad ganacsiga si dhab ah u qaadatid oo aad u ganacsatid sida xirfadlayaasha, Adeeggan Qolka Ganacsi ee Forex adiga ayaa loogu talagalay adiga! ” - Xubinta Qolka Ganacsiga (2019)
Waan helay Forex Lens dhowr bilood ka hor waana su'aal la'aan adeegga ugu fiican ee Forex forex ee aan helay. Waxaan isku dayay malaha sideed ama sagaal kamid ah waxaana macquul ah inaan qarash gareeyay $ 2000 qiimeynta adeegyo kaladuwan. “ -Xubinta Qolka Ganacsiga (2018)
Kulamo fara badan oo toos ah maalin kasta oo ku wareegaya suuqyada ganacsiga (yada) maalinta.
Fikradaha ganacsiga ee lala wadaago sicirka gelitaanka, Joojinta Khasaaraha, iyo Qaadashada bartilmaameedyada macaashka leh shaxda shaqada iyo waqtiga.
Dib u soo koobida fiidiyowga maalinlaha ah ee kal-fadhiyada tooska ah haddii ay dhacdo inaad seegtay ama aadan haysan waqti aad ku daawato kal-fadhi buuxa
In ka badan 100 + fiidiyowyo ah waxyaabaha loo abaabulay inay kaa caawiyaan inaad barato hababkeena ganacsi.
Noqo Ganacsade Pro maanta
Ku soo biir Bulshadeenna Discord
Ganacsadaha Machadka (Kulamada Tooska ah)
Waxbarashada Lacagta Smart Money
Istimoku Istaraatiijiyada Ichimoku ee Forex
Lagu soo bandhigay SiriusXM
Ku soo biir beesheena maanta Discord oo la hadal ganacsatadayada iyo Xubnaha kale! #Lens Lifaaqa https://t.co/2RRYlrnJYH
- Forex Lens (@Soomaalikabe) April 9, 2020
Baro, Ganacsiga, Faa'iidada
Forex Lens waxay siisaa xalalka ganacsiga Forex ee bilowga ah iyo ganacsade khubaro isku mid ah. Xor baad u tahay inaad soo dirto emaylka ama aad na soo wacdid wixii su'aalo ah, ra'yi ama walaacyo.
Xarunta CF Toronto Eaton,
483 Xargaha cagaaran,
© Copyright - Forex Lens - Indhahaaga Suuqyada
Dijitalkeena & suuqgeynteena waxaa awood u wada shaqeeyayaashayada Fuse Your Inc
La soco in ganacsiga forex iyo ka ganacsashada suuq kasta oo ay ku jiraan crypto uu leeyahay suurtagalnimada khasaare maaliyadeed iyo waliba guulo. Ha ku ganacsan lacag aadan iska bixin karin. Waa macquul inaad lumiso lacagtaada oo dhan markaad ganacsato maxaa yeelay waxaa jira arrimo badan oo aan gacantaada ku jirin ama aan annaga ahayn. Qaar ka mid ah dillaaliyeyaasha guryaha ka ganacsada ayaa laga yaabaa inay mas'uuliyad kaa saaraan ganacsiga ganacsiga ee ka sarreeya dheelitirkaaga oo dhaafa xad-dhaaf. Ka digtoonow in mas'uuliyaddani adiga iska leedahay. Forex Lens mas'uul kama ahan wixii khasaare ah ee kugu dhici kara natiijada adeegyadayada, calaamadaha forex, calaamadaha crypto, xisaabaadka la maareeyay ama calaamadaha kale ee suuq ee aan ku siin karno waqti ka waqti. Forex Lens ayaa loo istcimaaali doonaa sidii qalab waxbarasho oo kaa caawiya inaad aragto sida ganacsatada maalinlaha ah iyo ganacsatada wareega ay u shaqeeyaan maalin ilaa maalin iyo usbuuc ilaa toddobaad. Markii aad iska qorto rukumad ahaan waad aqbali kartaa taas Forex Lens ma siinayo talo bixin lacageed laakiin waxay bixinaysaa saami waxbarasho xagga suuqyada ah. Annagu mas'uul kama saarno waxtarka ama khasaaraha koontadaada ka dhashey calaamadahayaga iyo / ama adeegyada ama wixii alaab ah oo laxiriira safka hore ee websaydhada oo ay kujirto tan.
Goobtani waxay isticmaashaa cookies. Markaad sii waddo bogga, waxaad oggolaaneysaa adeegsiga buskudyada.
OKWax dheeri ah baro
Kukiyada cookie iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Waxaan codsan karnaa cookies si qalabkaaga loogu dhejiyo. Waxaan u isticmaalnaa cookies-ka si ay noogu soo wargeliso goorta aad booqatid degellooyinkayada, sida aad noola macaamileyso, si aan u kobcinno khibradaada isticmaale, iyo in aan habaynno xiriirkaaga websaydhka.
Guji cinwaannada noocyada kala duwan si aad wax badan uga sii ogaato. Waad beddeli kartaa qaar ka mid ah waxyaabaha aad doorbidayso. Xusuusnow in xannibaadda qaar ka mid ah noocyada buskuddu ay saameyn ku yeelan karaan khibradaada ku saabsan websaydhyadayada iyo adeegyada aan awoodno inaan bixinno.
Kukiyada Websaydhada Aasaasiga ah
Kukiyadahan ayaa si adag lagama maarmaan u ah inay ku siiyaan adeegyo laga heli karo degelkayaga iyo in loo isticmaalo astaamaha qaarkood.
Sababta oo ah cookies-gu waa mid lagama maarmaan u ah gudbinta websaydhka, ma diidi kartid adigoon saameyn ku yeelanaynin sida ay u shaqeyso bartayada internetka. Waad xannibi kartaa ama tirtiri kartaa adoo badelanaya jadwalka biraawsarkaaga oo aad ku qasbi karto inaad xannibto dhammaan cookies-yada boggaan.
Kukiyadaha Google Analytics
Kukiyadaani waxay aruuriyaan macluumaad loo adeegsado qaab iskucelcelis ahaan ah si ay nooga caawiso fahamka sida loo adeegsado websaydhkeena ama sida ay wax u tareyso ololaheena suuq geynta, ama inay naga caawiso inaan habaynno boggayaga iyo arjigaaga si aan kor ugu qaadno waayo-aragnimadaada.
Haddii aadan dooneynin inaan raadraaca aragtidaada ku hayno bartayada waxaad ka joojin kartaa raad raacitaanka biraawsarkaaga halkan:
Guji si aad u awoodsiiso / u joojiso raadraaca google.
Adeegyada kale ee dibedda
Waxaan kaloo isticmaalnaa adeegyo dibadeed oo kaladuwan sida Google Webfonts, Khariidadaha Google iyo bixiyeyaasha Fiidiyowga Dibadda. Maaddaama bixiyeyaashaani ay ururin karaan xog shaqsiyadeed sida cinwaankaaga IP-ga waxaan kuu oggolaaneynaa inaad halkan ku xannibto. Fadlan la soco in tani ay si weyn u yarayn karto shaqeynta iyo muuqaalka bartayada. Isbedelada ayaa dhaqan galaya marka aad dib u soo celiso bogga.
Dejinta Google Webfont:
Guji si aad u awoodo / aad uxiliso google webfonts.
Dejinta Khariidadaha Google:
Guji si aad u awoodo / aad uxiriso khariidadaha google.
Muuqaallada fiidiyowga Vimeo iyo Youtube:
Guji si aad u awoodo / aad uxirid xargaha fiidiyowga.
Waxaad ka aqrisan kartaa waxa ku saabsan cookies-ka iyo dejinta asturnaanta si faahfaahsan bogga Boggan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.